Ukuhlaziywa Kwamalayisense Okunikela ku-Canonical neFedora | Kusuka kuLinux
Lo mbhalo uvela emazwaneni engithole kuwo I-linux kakhulu lapho ngangifuna okokuthunyelwe kwami ​​mayelana IGnome 3.2: i-systemd? I-Gnome OS? Akusekho ukusekelwa kwamapulatifomu we-NO-LINUX?.
Umfundi walelo portal wazibuza kancane noma kancane, okuxakayo ukuthi abantu baseGnome babebhema. Lapho i-AntiUbuntu ethile (i-not a radical pro Ubuntu, kuphela ukuthi angihlanganyeli nalabo abathanda ukuhlekisa noma ukuhlekisa ngabanye abanesifiso sokuvikela noma ukwehlisa okuthile, noma ngabe bangabasebenzisi boHlelo Lokusebenza noma yini) uphendule ngesixhumanisi esiya kuWikipedia ku Isivumelwano sabanikeli beCanonical.
Ngokunemba okuphelele umbhali walokhu okuthunyelwe, i-MetalByte, ukhombisile ukuthi ophawulayo uphambukisa ukunaka nokuthi iGnome ayingcwele kangako njengoba ibingathanda ukuvela, ngamaqiniso amaningana, kufaka phakathi ukwephulwa kwamazinga e- freedesktop.org.
Amazinga okuthi, ngokudidayo, abeShell Unity kanye ne-KDE Environment, phakathi kokunye - ngisho neGome ngezindlela eziningi - inhlonipho.
Akunjalo ngenxa yalesi sizathu iyeke ukunginaka, hhayi nje kuphela njengommeli, kepha njengomsebenzisi we-Ubuntu.
Imininingwane etholakele icebile impela, futhi bengilokhu ngifunda futhi ngifunda kabusha isivumelwano selayisense sekhasi eli-1 (elilodwa) elihlongozwe yiCanonical amahora ambalwa futhi kunemininingwane enesifiso.
Okokuqala kufanele sikhumbule ukuthi Ubuntu buthuthukiswa yiCanonical Ltd. hhayi yiCanonical Foundation, ngesizathu esilula, uShuttleworth udale inkampani, hhayi iSisekelo.
Okwesibili, ungathathwa yisihloko sesixhumanisi, kuyiqiniso ukuthi singathola izihloko ezingavunyelwe ngokucacile, kepha azisho lutho. Lapha e-Argentina, konke okungavunyelwe ngokusobala kuvunyelwe ngokuphelele.
Angazi ngomthetho neziphathimandla zesiNgisi lapho i-CLA ithobela khona isigatshana sayo se-12.
Manje, iWikipedia ichaza isivumelwano sabanikeli beCanonical esigabeni seSivumelwano Selayisensi Yomnikeli. Okokuqala-ke, kufanele sazi ukuthi yini eyamuva.
Ngokusho kwe-Wikipedia Isivumelwano Selayisense Labanikeli (i-CLA) ichaza imigomo lapho impahla enobuhlakani inikelwa noma yabelwa inkampani noma iphrojekthi. Kuvame kakhulu kuMthombo Ovulekile.
Ngokuvamile kunezizathu ezimbili ezigqugquzela i-CLA: (1) ukuvikela kangcono iphrojekthi, (2) noma ukunikeza kabusha ilayisense ngaphandle kokubonisana nomnikeli.
Yebo, lolu hlobo lwelayisense lusetshenziswa, futhi phakathi kokunye:
I-Apache Software Foundation
Fedora (I-Red Hat) I-CLA Fedora, iyefana neCanonical.
Zend ngoba Uhlaka lweZend
QAPHELA: Akunjalo ngokwemigomo efanayo nenkontileka yeCanonical.
Ngikubona kufanelekile ukuhlaziya ezinye izigaba zeFedora - Red Hat CLA bese ngiyiqhathanisa naleyo yeCanonical, hhayi kuphela ngenxa yokufana okukhona ekilasini, kodwa nangenxa yomehluko osobala.
Kepha futhi, ngenxa yokuqina kweCanonisoft ngaphandle kokubheka abanye abalingisi boMthombo Ovulekile. Siqala, kwiCLA Canonical yayo yenza kucace futhi ichaze izinhloso zesivumelwano sayo, futhi izichaze ngokuthi "ungumnikazi we-copyright".
Ngakho-ke, abakwenzayo ukucela umnikeli / unjiniyela ukuthi agcwalise ifomu abanikeza ngalo ilungelo lobunikazi ku-Canonical (naseFedora lapho kufanele khona) bese bethola ilungelo elingenabukhosi, elingapheli, nelomhlaba wonke, ukusebenzisa, ukukopisha, shintsha, xhumana futhi wenze utholakale emphakathini (uma ufuna nge-inthanethi) bese usabalalisa, esimweni ngasinye ngendlela yokuqala noma eguquliwe, iminikelo eyenziwe noma "ikhodi enelayisense" ngokuyibiza ngandlela thile.
I-Canonical grants kimi Ilungelo lomhlaba wonke, elingakhethi, elingenayo imali yobukhosi kanye nelungelo lokuphikelela lokusebenzisa, ukukopisha, ukuguqula, ukuxhumana nokwenza ukuthi litholakale emphakathini (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo nge-Intanethi) futhi usabalalise, esimweni ngasinye noma ifomu eliguquliwe, Iminikelo Ebelwe njengoba ngifisa.
Isigaba II CLA Canonical.
Manje, unjiniyela uqhubeka kanjani? Mane nje ulande i-CLA bese uthumela i-imeyili okuyinamathisela futhi nasemzimbeni we-imeyili kuthi: "Ngiyasamukela isivumelwano se-Canonical Contributor Agreement esifakiwe." Lokhu esimweni se-Canonical's CLA, esivuse intshisekelo yalesi sihloko.
Okunye ukuqhathanisa neFedora CLA - Red Hat.
Okokuqala, kufanele sazi ukuthi ukuthuthukisa isoftware ye-Ubuntu akusho ukuthi kufanele inamathele ku-CLA, kuzodingeka uma isoftware eyenziwe noma eguquliwe ingekhathalogi yeSoftware enikezwe yi-CLA, ngokwesibonelo noma yikuphi ukuguqulwa kwezinkomba , njll.
Kodwa-ke, ngokusho kwe-CLA, unjiniyela unikeza iCanonical ukuqinisekisa ngokugcwele ilungelo lobunikazi, kunengqondo ukuthi iCanonical izoba nguMnikazi.
Lesi sabelo senziwa siqinisekise ilungelo lobunikazi elingakhethi bodwa, elingenayo imali yasebukhosini futhi lizoqhubeka ukusetshenziswa, ukukopisha, ukuguqula, ukuxhumana nokwenza ukuthi litholakale emphakathini (uma lifunwa nge-inthanethi) futhi lisatshalaliswe, noma ngabe kunjalo, kungaba ikhodi yoqobo noma kuguquliwe.
Ngamanye amagama, i-Canonical isuselwe njengoba ne-Canonical ibuyisela emuva kunjiniyela. Izigaba 1 no-2 ngokulandelana.
Akukho okungabelwa okudingidwa kwenye inkontileka noma inkontileka yomsebenzi (isigatshana 9) noma ikhodi engahle yephule ilungelo lobunikazi.
1. Nginikeza i-Canonical ngesiqinisekiso esigcwele sesihloko yonke i-copyright manje noma ngokuzayo ngiphila kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba kunoma iyiphi Iminikelo Ebelwe. Uma ngabe lesi sabelo nganoma yisiphi isizathu singasebenzi, futhi sincike kumalungelo we-Canonical ku-5 ngezansi, nginika i-Canonical ilayisensi yomhlaba wonke, engakhethi bodwa, engenayo imali yasebukhosini nelayisensi engapheli yokusebenzisa, ukukopisha, ukuguqula, ukuxhumana nokwenza itholakalela umphakathi (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo nge-Intanethi) bese usabalalisa, esimweni ngasinye ngendlela yokuqala noma eguquliwe «Iminikelo Eyabelwe» njengoba ifisa.
2. Ukunikezwa kwe-Canonical kimi ilungelo lomhlaba wonke, elingakhethi lodwa, elingenabukhosi kanye nelaphakade lokusebenzisa, ukukopisha, ukuguqula, ukuxhumana nokwenza ukuthi litholakale emphakathini (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo nge-Intanethi) nokusabalalisa, esimweni ngasinye ifomu yoqobo noma eguquliwe, Iminikelo Eyabiwe njengoba ngifisa.
Izigaba 1 no 2 CLA Canonical
Ngokwengxenye yayo, iFedora - Red CLA ithi:
2. Umnikeli weSibonelelo seLayisense. Unikeza iRed Hat, Inc., esikhundleni seProjekthi, nakwabemukeli be-software esatshalaliswa yiProjekthi:
(a) ilayisensi yelungelo lokushicilela engapheli, engakhethi bodwa, yomhlaba wonke, engenamali, engenamalayisensi e-copyright angenakuguqulwa ukukhiqiza kabusha, ukulungiselela imisebenzi esuselwe, yokubonisa esidlangalaleni, ukwenza obala, ukwenza i-sublicense, nokusabalalisa iGalelo lakho kanye neminye imisebenzi evela kokunye; futhi,
(b) ilayisensi yelungelo lobunikazi engapheli, engakhethi bodwa, emhlabeni wonke, engenamali, engenakuguqulwa (ngokuya ngeSigaba 3) yelayisensi lobunikazi lokwenza, lisebenzise, ​​lisebenzise, ​​lithembise ukuthengisa, ukuthengisa, ukungenisa, kanye nokunye ukudlulisa Umnikelo wakho nemisebenzi esuselwe kuyo, lapho leyo layisense isebenza kuphela kulezo zimangalo zobunikazi ezinelayisense yakho eziphulwe Umnikelo wakho kuphela noma ngokuhlanganiswa koMnikelo wakho nomsebenzi owuthumele kuwo Umnikelo. Ngaphandle kwelayisense enikezwe kulesi sigaba, ugcina konke okulungile, isihloko kanye nentshisekelo kwiminikelo yakho.
Isigaba 2 CLA Fedora.
Ukubuyela ku-Canonical, esigatshaneni sesi-3 kucatshangwa ukuthi kufanele iqondwe njengeSoftware, ejwayelekile kakhulu ezindabeni zesivumelwano.
Futhi ithi igama elithi Software elisetshenzisiwe IN nakwINKONZO, libhekisa kuzo zonke izinhlelo zekhompyutha ezenziwe njengengxenye ye- Uhlelo lwe-Canonical. Uhlu ukuthi, ngenxa yezizathu ezisobala, lungaguqulwa ngezikhathi ezithile.
Esigatshaneni sesi-4 ucabanga ngeminikelo eyabiwe njengokulungiswa noma ukuthuthuka okwenziwe kukhodi ngonjiniyela ofanayo.
Esinye sezigatshana ezithokozisayo yi-6, ngoba kuyo i-CLA iphoqa iCanonical ukuthi inikeze ikhodi ehambisanayo, nangaphansi kwemigomo ye- "Free Software License", ngokwencazelo enikezwe yi-FSF ngale ndaba futhi ivuselele isikhathi ngasinye .
Kepha, lona ngumnyango ovulekile uma uthanda, ngoba iCanonical, ngokubona kwayo, ingenza isoftware itholakale emphakathini ngaphansi kweminye "imigomo yelayisense", engafani nenye "enye ilayisense". Njengoba sibonile, lokhu kuvamile futhi kungenye yezinhloso zesivumelwano selayisense yomnikeli.
ICanonical ngokujwayelekile izokwenza Iminikelo Eyabelwe itholakale emphakathini ngaphansi kwe- "Free Software License", ngokwencazelo yalelo gama elishicilelwa yiFree Software Foundation ngezikhathi ezithile. ICanonical nayo, ngokubona kwayo, ingenza Iminikelo Ebelwe itholakale emphakathini ngaphansi kweminye imigomo yelayisense.
Isigaba somthetho 6 CLA Canonical
Okufanayo kuyenzeka ngeFedora, ephuzwini 2 - (a) i-CLA inika amandla iFedora - Red Hat kwi-sublicense, ngaphandle kokusho ukuthi iyiphi imigomo noma ngaphansi kwayiphi ilayisense.
Uma kuqhathaniswa, i-CLA kaFedora ivumela kakhulu futhi, uma uthanda, iyingozi ekuvuleni umthombo, ngoba i-Canonical's CLA iyiphoqa ukuthi isabalalise ngaphansi kwe-FSL noma ngaphansi kweminye imigomo yelayisense. Esikhundleni salokho uFedora - iRed Hat izokwazi ukuthola ilayisense nemali encane ngaphansi kwanoma iyiphi ilayisensi nemibandela efisayo.
Kepha okugqame kakhulu kunakho konke, nokweqa ukuzivikela, uma uthanda, kweCanonical ngokumelene neFedora, ukuthi i-CLA yalokhu okulandelayo ephuzwini 2 - (b) igunyaza uFedora - Red Hat, phakathi kwezinye izinto nasezimweni ezithile ukuthi i-CLA iyachaza, ukuthengisa umnikelo wonjiniyela.
Ngokufanayo, iCanonical ngeke iphoqelele unjiniyela noma iyiphi i-patent eye yephulwa ngunjiniyela, esebenzisa i-copyright yakho noma nge-Software noma ngeminikelo eyabelwe.
[…] I-Canonical ngeke iqinisekise noma iphoqelele ngokumelene nami noma yiliphi ilungelo lobunikazi eliphulwa Yimi ngokusebenzisa amalungelo Amalungelo obunikazi Wami ku-Software kanye / noma Neminikelo Eyabelwe.
Isigaba somthetho 7 ku-CLA Canonical enhle.
Ngokuphambene nalokho, iFedora - Red Hat, esigatshaneni sesi-3 samaqabunga ayo e-CLA ivula ithuba lokuthi, uma kungenzeka kube nokuqulwa kwamacala, ukwabiwa kungawa futhi uMnikeli ubophezeleke enkantolo.
Ngasohlangothini lwe-Canonical, unjiniyela ngeke aphoqelele noma iyiphi i-patent ngokumelene: (a) neCanonical; (b) noma ngubani othola i-Software noma i-Assigned Contribution yi-Canonical; (c) Noma ngubani othole iSoftware noma Iminikelo Eyabelwe ngaphansi kweLayisense YeSoftware Emahhala lapho amalungelo obunikazi ephulwa ukusetshenziswa kweLungelo lokushicilela. Okunengqondo.
Ngeke ngigcizelele noma ngiphoqe noma yiliphi ilungelo lobunikazi ngokumelene (a) ne-Canonical (b) noma ngubani othole iSoftware kanye / noma Iminikelo Eyabelwe evela ku-Canonical noma (c) noma ngubani othole iSoftware kanye / noma Iminikelo Eyabelwe ngaphansi kweLayisense YeSoftware Yamahhala, lapho lelo patent lephulwe yinoma ngubani wabo osebenzisa amalungelo we-copyright ku-Software kanye / noma neminikelo eyabelwe. […]
Isigaba somthetho 7 CLA Canonical.
Ngenxa yalokho singasho ukuthi i-CLA, esetshenziswa kaningi kakhulu emthonjeni womthombo ovulekile, inengqondo ngokuphelele futhi iyathetheleleka. Ngaphezu kwalokho, ukuqhathaniswa kwama-CLA aseFedora - iRed Hat neCanonical kuveza izinto ezithandekayo emaqenjini, lapho zombili (amaqembu nezinkampani) zizuza khona.
Impela iphuzu eliyimpikiswano enkulu ukuthi kungenzeka ukuthi zombili izinkampani (ngisho zombili ngoba sihlaziya kafushane zombili) zigcinelwe i-sublicense. IFedora CLA - iRed Hat ikusho lokhu ngokusobala kepha ayicacisi ukuthi izokushicilela ngaphansi kwayiphi imigomo okuqukethwe, ingasaphathwa eyokuthi izokwenza lokho ngaphansi kwayiphi imigomo uma kwenzeka kuba nemishanguzo.
Endabeni yeCanonical, iphoqelekile ukusebenzisa i-Free Software License ngokuya ngemigomo yeFree Software Foundation, kepha ingashintsha ngokushintshana imigomo yelayisensi, njengoba kushiwo ku-CLA, "eminye imigomo yelayisensi" ngaphandle kwalokhu okushoyo , kunoma ikuphi Ezimweni eziningi, sebenzisa ilayisense okungeyona yamahhala noma yokuphathelene.
Ngincoma ukufunda futhi IHarmony Project, okuthakazelisa ngokwedlulele.
Ngicabanga ukuthi esikhundleni sokukhuluma nje kungaba ngcono ukuthatha imizuzu eyi-10 bese uhlaziya inkinga osusondele kuyo. Ngikusho lokhu futhi nginikeza njengesibonelo icala lamazwana agqugquzele ukutadishwa nokuhlanganiswa kokungena.
Abaningi abangavumelani neCanonical / Ubuntu noma "ukwamukelwa" kwayo, esikhundleni sokubheka izinto ezinenhloso, basebenzisa izikhalazo ezingenzi lutho ngaphandle kokwenza i-Flames futhi ezingasisi ndawo.
Ekugcineni, anginacala ekusetshenzisweni kwalokhu okushiwo, kumane kungukuhlaziywa okuyisisekelo kwe-CLA, kulokhu, zombili izinkampani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ukuhlaziywa Kwamalayisense Okunikela ku-Canonical neFedora
kahle, uqobo lwayo lwezincwadi zeBhayibheli kuseseyinkampani (futhi inelungelo lokushiya lezo "zindawo ezivulekile") ... mhlawumbe manje sekungumngane wawo wonke umuntu, lowo ofaka iLinux kubantu. ngokuzayo abantu bazoqala ukuzibuza; Kwenzeka kanjani ukuba ngibaluleke kangaka? Abasebenzisi abayizigidi ezingama-200 abaziphakamisanga eminyakeni emi-4? Mhlawumbe lapho-ke umuntu uqala ukungabaza izenzo zabo. Noma akekho okhumbula iGoogle? Ngabe akaqalanga nje waba yinjini yokusesha enhle… Njengoba ngishilo, kimi kumane kuyizikhala ezivulekile ...
Mhlawumbe isibonelo seGoogle besingaphezu kwesigamu kakhulu, kepha kuyiqiniso ukuthi banayo leyo njongo, noma ngabe bayayifeza noma cha kungenye indaba. Uma ubheka iLinux, uhlelo olusebenzayo olungabizwa luzinzile, kepha namuhla izinguquko eziningi ziyenzeka ku-X…. Hhayi iCanonical kuphela kepha ama-distros ngokujwayelekile. bahlose ukufaka iso labasebenzisi… uma beqhubeka kanjena, angicabangi ukuthi izinhloso ezihlongozwayo zikhona. Qaphela, ngilokhu nginikeza umbono wami ukude! = D
Ngiyavumelana nokuvulekile okuphelile. Cishe abasebenzisi abayizigidi ezingama-200, ayinakuqhathaniswa neGoogle, ikakhulukazi ngoba ukuze ikhulele kulelo nani labasebenzisi kufanele kwenzeke:
1- Ukuthi emhlabeni wonke ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux akusasetshenziswa, futhi akunakwenzeka, kunemikhiqizo enekhwalithi eningi noma engaphezulu kune-Ubuntu.
I-2- Windows, ngasizathu simbe, iyeke ukusetshenziswa cishe kakhulu.
3- Uma ungena emakethe yamaThebhulethi, ama-Smartphones nokunye, kufanele ubone ukuthi kwamukelwa kanjani.
4- Phakathi kwabanye.
Ngicabanga ukuthi kungaphezulu kwe-utopia nenyakatho ukubhekana nayo.
Manje akusikho ukuthi ungumngani wawo wonke umuntu, kepha namuhla uyinto yokugxekwa, ekhiqizayo futhi engakhiqizi, kusobala kusuka endaweni ahlala kuyo. Kwenzeka ukuthi izinto eziningi ezigxekayo ngento eyodwa zikhona nakwezinye. Noma kutholakala into ethile futhi ngaphandle kokuyicubungula isetshenziswa njengokugxeka okubhubhisayo, futhi ngama-5 kuphela sithola iqiniso elihlukile. Njengoba isisho sithi, kulula ukubona utshani esweni lomunye umuntu. Ngalokhu angisho ukuthi uFedora - Red Hat uyi-ogre, kepha umane uyisibonelo.
Mhlawumbe, umthombo ovulekile futhi uyimodeli yebhizinisi.
«Bahlose ukufaka amehlo abasebenzisi ...» Sivuma ngokuphelele
Ngiyavuma bafo! Ngicabanga ukuthi okuvezwa uMartín kule ndatshana kumnandi, ngoba imvamisa Ubuntu ugxekwa kuphela x ukugxeka (ama-troll) futhi kaningi lapho ucubungula izimpikiswano esiqaphela ukuthi i-1) azilona iqiniso noma i-2) amanye ama-distros enza okufanayo noma "okubi kakhulu ". Ngamafuphi, kuyimpikiswano ethokozisayo uMartín ayivulayo. Bengingazi ngobuqotho ukuthi kukhona la malayisense wokunikela. Impela, ukuba khona kwayo kunengqondo kepha bengingakaze ngicabange ngakho.
Ngiyakuhalalisela Martín! Enye indatshana enhle kakhulu!
I-athikili yakho iyathakazelisa kakhulu, njengoba bethi "akekho owaziyo ukuthi usebenzela bani" Ngakho-ke sihlala sizifunda izinkontileka!
Umbuzo muhle, ngoba awusiwo umbuzo wemithetho, kepha wuqhinga. Into eyodwa i-copyright, enye ilayisense, okungaba yinoma ngubani.
Okudluliswayo yi-copyright. Futhi i-Canonical isabalalisa, ngokwesisekelo, ngeLayisense Yesoftware Emahhala, uma, uma kunesidingo, ungaguqula imigomo yelayisensi. Yilapho ukutolikwa "kweminye imigomo yelayisense" kusebenza khona. Njengoba "eminye imigomo yelayisense" ayifani nokuthi "enye ilayisense".
Endabeni kaFedora, kuyefana, ngaphandle kokuthi iFedora - Red Hat ayenzi ilayisense noma i-sublicense ngaphansi kwanoma iyiphi ilayisense. Ungakwenza lapho ufuna khona, nini futhi kanjani. Ngisho, ngokungafani neCanonical, iFedora - Red Hat ikubeka ngokusobala ukuthi, ecaleni elibangelwe yikhodi oyinikiwe, "uyazilungisa futhi isabelo siyawa." ICanonical, okuwukuphela kwereferensi eyenzayo kulokhu ukuthi "ukuvimbela ukudluliswa komsebenzi ngaphandle kwamalungelo noma lokho kungumkhiqizo wesivumelwano noma isivumelwano sokuqashwa nabantu besithathu." Okuthile okunengqondo kuwo womabili amacala, kuyinto efana namalungelo wangempela kanye "nobubi obufihliwe bento." Uma uthenga okuthile bese uthola ukuthi inemikhuba emibi, ukukhubazeka, okuthi, ukube ubukwazi kusengaphambili, ubungeke wathenga, ungabuyisela emuva ukuthengisa nokunye uma umthengisi enokholo olubi. Yebo, lezi zigatshana ziveza into efanayo.
Inzuzo enkulu etholwa yilabo abasebenzisa i-CLA, futhi bathatha iCanonical njengesibonelo: Uma unjiniyela, uguqula noma wenza isoftware efakwe kukhathalogi enamathiselwe ku-CLA, unikezela ilungelo lobunikazi eliqinisekisa ukuthi awwephuli ilungelo lobunikazi ungenza kanjalo. Uyavuma futhi ukuthi ungathathi zinyathelo ngokumelene neCanonical, noma ngubani othola isoftware yeCanonical, noma noma ngubani othola iSoftware ngaphansi kweLayisense YeSoftware Yamahhala. Futhi, iCanonical ayiphoqeleli lutho olumelene nawe, kufaka phakathi umcimbi lapho iCanonical ishintshe amalayisense. Kukhona uhlobo lokuvikelana, ngokusobala kungumnikazi, akukho okunye. Kangangokuthi wena, unjiniyela, yize usudlulise ilungelo lobunikazi, ungaqhubeka wenze okukuthokozisayo ngekhodi, kepha kufanele wazise iCanonical futhi uhloniphe uhlaka lwe-CLA, olungaqinile futhi olugcina luzuzisa bobabili. Okusho ukuthi, izinhloso 1 no-2 zokuthunyelwe.
I-Fedora - Red Hat CLA igcina ukuzula ekhanda lami, hhayi ngenxa ye- "sublicense", kepha ngoba igunyaziwe ukunikela ngqo kanye / noma ukuthengisa ikhodi.
Lezi zinsuku nginikeza ukubuya kwamanye ama-CLA, kulawo ashiwo.
I-athikili enhle kakhulu, ibhalwe kahle kakhulu, ibhaliwe futhi icwaningwe kahle. Izinto ezinjengalezo kunzima ukuzibona kulezi zinsuku! Hhayi kwi-inthanethi kuphela, kepha futhi nakulokho okuthiwa "ubuntatheli bokuphenya" kweminye imidiya.
Mayelana nodaba, bengingazi ukuthi kukhona la malayisense futhi uma ngikhuluma iqiniso akubonakali kunengqondo kangako kimi. Ngaphandle kwezimo lapho ikhodi ye-Canonical iguqulwa khona, kepha ingabe i-GPL ichaza into efanayo, ngaphandle kokunikeza i-copyright? Angiwuqondi umehluko phakathi kokudluliswa kwamalungelo enkampanini noma ukumane uthathe iphrojekthi bese uyilandela wedwa, kunikezwe isibonelo ukuthi isoftware inamalayisense ngaphansi kwe-GPL, ngaphansi kwamanye amalayisense avumela ukunikezwa kabusha kwamalayisense kungaba enye indaba.
Ngaphandle lapho engikushoyo kuyisiphukuphuku, imithetho akuyona isudi yami eqinile.
Ezinye izindlela zamahhala ze-Skype